Wargayska 'Metrobus' wuxuu kordhiyaa mashaariicda guryaha ee Avcilar iyo Beylikduzu | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMetrobus news wuxuu kordhiyay mashaariicda guryaha ee Avcilar iyo Beylikduzu
02 / 08 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Sida laga soo xigtay xogta ka soo baxda Sahibinden.com, tan iyo markii ugu horreysay ee ku saabsanaa xaruntii la yiraahdo Avcılar-Beylikdüzü, waxaa la daabacay 2011, waxaana ay kordhisay tirada mashaariicda degaanka ee laga dhisay laba degmo oo 50 ah.
Avcılar-Beylikdüzü khadadka metrobus, oo dhismo ku dhowaad hal sano oo uu dhawaan bilaabay tijaabooyin tijaabo ah, ayaa si weyn u kordhiyay tirada mashaariicda guryo la'aanta ah ee degmooyinka labada dhinacba. Inta Turkey ee kun 800 ka badan eber, mashaariicda degaanka iyo xafiiska in ay gaaraan hal click sida ku cad xogta mashruuca sahibinden.co, line Avcılar-Beylikdüzü wakhtiga Metrobus ka dib markii warka la eego 2011 bilaabi doonaan, 50 boqolkiiba kororka tirada mashaariicda la degan yahay ee labada gobol ayaa la diiwaan geliyey.
Mashruucyada degaanka ee dhismaha ee Avcılar iyo Beylikdüzü, miisaanku wuxuu ku jiraa noocyada 2 + 1. 2 + 1 waxaa ku xiga 1 + 1 wareegyada.
Sahibinden.com waa cinwaanka ugu horeeya ee loogu talagalay dadka raba inay iibsadaan
bixinta click hal helaan hantida maguurtada ah mashaariicda degaanka iyo ganacsiga oo dhan Turkey 800 ka badan kun mashaariic ka portal Mashaariicda ee sahibinden.co tumayow, oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan mashruuca, macluumaad faahfaahsan waxaa laga heli karaa. Muuqaalka ugu muhiimsan ee bogga "Search Search on Map", ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala mashruuca khariidada iyaga oo hoos ugu dhaadhacay faahfaahinta wadooyinka iyo waddooyinka.
Sida laga soo xigtay xogta, dadka isticmaala waxay booqdaan mashaariicda Florya, Beylikdüzü, Büyükada iyo Zeytinburnu intooda badan. Inkastoo bogga uu yahay guryaha ugu badan ee la raadsado, ka dib baaritaan guri ayaa la socda raadinta deganaansho iyo baaritaan guri.
Metrobus ayaa u mahadceliyey Mayor Mayor oo ka yimid Beylikdüzü
Mashruuca ka gudubka Gacanka ayaa kor u qaaday sicirka guryaha ee Yalova
Mashruucyada sida Marmaray iyo Metrobus waxay kor u qaadeen khidmadaha guryaha 75
Beerka ayaa la socda jidka tareenka xawaaraha sare ee sugaaya xayeysiinta bangiyada
Avcılar Metrobus Station Cusbooneysiin